Tippani Bislesion – Page 55 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
उदय संभव छ नेपाली बिन लादेनको ?
स्वाभिमान बन्धक राखेपछि के हुन्छ ? हालत माओवादी केन्द्रको हेरे पुग्छ । माओवादी केन्द्रमा रहेकाहरुले आफूहरु ओली सरकारबाट अलग्गिएपछि सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने गरेका छन् । ओलीमा संसदीय नैतिकताको मापन अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेपछि देखिने छ । तर विगत हेर्दा विराट आस्था र विचारको राजनीतिक धरातलमा उभिएर आएको माओवादी केन्द्रका बारेमा निकै […]
यसकारण असफल भयो टर्कीमा सत्ता पल्टाउने प्रयास ?
एजेन्सी । टर्कीका प्रधानमन्त्री बिनाली यिलदरिमले सत्ता हत्याउने प्रयास असफल बनाएको बताउँदै यसको लागि जिम्मेवार जनताको साथ यसका हकदार रहेको बताएका छन् । शुक्रबारको रातको केही घन्टा सम्म सयौं सैनिकहरुले राजधानी अंकारा र इस्तानबुलका महत्वपूर्ण क्षेत्र कब्जामा लिएर राखे । घन्टौसम्म राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगान तैयप कहाँ छन् भन्ने पुष्टि थिएन र उनी टर्कीको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा […]
फ्रान्सको घटना ः अतिक्रमणपछिको आक्रमण
फ्रान्सको दक्षिणी शहर निसमा फ्रान्सेली क्रान्तिको सम्झनामा मनाइरहेको एक भव्य कार्यक्रममा एकजना बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउंदा ८४ जनाको मृत्यु भएको समाचारले संसारमा सबैलाई चकित र त्रसित पारेको छ ।फ्रान्सको दक्षिणी शहर निसमा फ्रान्सेली क्रान्तिको सम्झनामा मनाइरहेको एक भव्य कार्यक्रममा एकजना बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउंदा ८४ जनाको मृत्यु भएको समाचारले संसारमा सबैलाई चकित र त्रसित पारेको […]